Minisiteran’ny Raharaham-bahiny: azo ao anatin’ny 72 ora ny “visa” | NewsMada
Minisiteran’ny Raharaham-bahiny: azo ao anatin’ny 72 ora ny “visa”
Hivoaka ao anatin’ny 72 ora ny fahazoana “visa” ho an’ny vahiny hiasa sy honina eto Madagasikara, manomboka ny 1 oktobra ho avy izao, noho ny fampiasana ny “e-visa”. Notokanana teny Anosy, omaly, ny ivontoerana famoahana pasipaoro sy ny fikirakirana elektronika ny “visa” eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny.
“Manamora ny asa io. Raha misy vahiny te hangataka “visa” eny amin’ny masoivohon’i Madagasikara any ivelany, miditra amin’ny “ligne” amin’ny alalan’ny “internet” toy ny ampiasain’ny masoivoho vahiny miasa eto amintsika amin’izao”, hoy ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny “visa” eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, Randrianarivony Faniry.
Azo avy hatrany ao anatin’io rafitra io avokoa ny mombamomba ilay mangataka “visa”, izay azo trandrahina avy hatrany. Efa maodely tokana no ampiasaina amin’izany fa tsy toy ny teo aloha hoe samy manana ny azy avy ny masoivohon’i Madagasikara any ivelany.
Manamora ny asa ny “e-visa”
“Manamora ny asan’ny polisy eo amin’ny sisintany koa izay”, hoy izy. Amin’ny maha “visa” azy, tsinjovina koa ny mampiasa: afa-manao fangatahana izany any an-trano. Mahazo fotoana izy ary manatona ny masoivoho. Kirakiraina amin’ny alalan’ny “internet” ny fangatahana avy eo, miaraka amin’ny foibe izay manapaka araka ny sokajina “visa” mifandraika amin’ny fangatahana.
Araka ny taratasy omen’ny mpangataka, misy ny famaliana izany mankany amin’ny masoivohon’i Madagasikara any ivelany, izay mahazo baiko ny amin’ny karazana “visa” omena azy. Manamora ny fiaraha-miasa eo amin’ny masoivoho sy ny minisitera izany.